တစ်ဘူဒါပက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမီးရထားလိုင်းများနံပါတ်နှင့်ရထားခရီးသွားပုံစံများကိုသင်ရထားရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတိုင်းရနိုင်ဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရရန်အလို့ငှာ၌သင်တို့ကိုယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကပ်ကာလများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ. သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ရထားဘူတာရုံမှာဤအချက်အလက်ရှာတှေ့နိုငျ. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် လက်မှတ်များဝယ်သည် အဆိုပါဘူတာမှာ.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/10-things-know-travel-by-train-in-budapest/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)